လမ်းပြကြယ်: ယနေ့ (၄. ၁၁. ၂၀၁၀ ) မနက် ၁၀ နာရီ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင်
ယနေ့ (၄. ၁၁. ၂၀၁၀ ) မနက် ၁၀ နာရီ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင်
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မလေးရှားဌာနခွဲ) ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်-လူငယ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ-မလေးရှား)၊ Burama Campaigh Malaysia နှင့် ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားနေကြသောသူများ ပူးပေါင်း၍ မလေးရှားရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအင်အားစုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းကာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
မလေးရှားအာဏာပိုင်များမှ ဆန္ဒပြသူများအား မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် လုံးဝဆန္ဒပြခွင့်မပြုဘဲ သံရုံးအနောက်ဖက်ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့၌သာ ပိုစတာကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များခွင့်ပြုခဲ့သောစည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖောနေရာသို့ သံရုံးမှဝန်ထမ်းနှစ်ဦးမှ
ဓာတ်ပုံလာရိုက်၍ မိုက်ရိုင်းစွာပြောဆိုမှုကြောင့် ဆန္ဒပြနေသောလူငယ်များနှင့် အခြေအတင်အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ကိုမင်းသိန်း - +6012 976 7810
ကိုကျော်ထက်မင်း - +6010 219 0921
ကိုကိုကျော် - +6016 621 0052